ဝိုင်းစုရဲ့ ဖက်ရှင် (၀ိုင်းစု ပိုတိုလိုက်ပါပြီ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ၀ိုင်းစုရဲ့ ဖက်ရှင် (၀ိုင်းစု ပိုတိုလိုက်ပါပြီ)
၀ိုင်းစုရဲ့ ဖက်ရှင် (၀ိုင်းစု ပိုတိုလိုက်ပါပြီ)
Posted by Bayote on Jun 6, 2011 in Celebrity, Entertainment | 51 comments
ရေမစိုခင်တောင် မလုံ့တလုံဖြစ်နေတာ… ရေများစိုလိုက်လို့ကတော့ … <<< ပထမပုံကိုရည်ညွှန်းသည်… ။
ဆိုးပါ့. နာမည်ကြီးမှ ပိုပို တိုနေတော့တယ်.. ရိုးရိုးသားသားလေးလဲ ပရိတ်သတ်က အားပေးပါတယ်လို့… မမ၀ိုင်းစု
ရေစိုလိုက်ရင်တော့ အဲ့နားမှာ အပန်းဖြေနေတဲ့သူတွေ အားလုံး စိတ်ညစ်သွားမှာ အသေအချာပါပဲ ။
ကိုPaukPhaw ပေးတဲ့link ကတကယ်လှတယ်…. ယုံဘူး…. ရွှီးနေတယ်ထင်တာရှင်…. sorry နော်စိတ်မဆိုးနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ ဘော်ဒီအလှဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ သတ္တိရှိတာ မဟုတ်သလို လူတိုင်းလည်း လုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး… လှတဲ့သူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေပဲ လုပ်လို့ရတာ… ပြီးတော့ နေရာဒေသဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်… အခု ၀ိုင်းစုရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ ထမိန်ကြီးနဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီကြီးနဲ့ ရေသွားကူးနေလို့ ဖြစ်ပါ့မလားလို့… ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ အဲဒီယဉ်ကျေးမှုကြီးကို အလုံပိတ်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားဖို့ မဟုတ်ဘူး… ယဉ်ကျေးမှုကို တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်နဲ့အမှီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တာကိုပြောင်းလဲ ထိန်းသိမ်းသင့်တာကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြင်တာပဲ… အခုခေတ်မှာ ဟိုးရှေးရှေးကလို မိန်းကလေးတွေ ထိုင်မသိမ်းလို ထမိန်တွေကို ၀တ်နေဖို့ ဖြစ်ပါတော့မလား… ပြီးတော့ ၀ိုင်းစုက မော်ဒယ် မင်းသမီးတယောက်… သူ့အလှကို သူထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်လို့ မြင်တာပဲ… တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင် ပလွန်းစတားတွေတောင် ရှိသေးတာပဲ… အားပေးတယ် မမ၀ိုင်းစု… မော်ဒယ်ဆိုတာ အင်တာနေရှင်နယ် တန်းဝင်နေနိုင်အောင် ကြိုးစားနေရမယ်… အတွေးအခေါ်ရော အလှအပရော အားလုံးပေါ့… ကိုယ်က ကွယ်ရာမှာ ထမိန်ကြီးဝတ်ပြီး ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး… ကိုယ့်အလှကို ထုတ်ဖော်တာ… ချီးယား ဆက်ကြိုးစား မမ
ဘော်ဒီအလှပြတာ ၊ ကိုယ်တုန်းလုံးချွတ်ပြတာက သတ္တိကို ထုတ်ဖော်ရာ ရောက်လို့လား …။ ဒါဆို ဟိုကားတွေ ရိုက်နေတဲ့ မိန်းမတွေကို သတ္တိခဲ သူရဲကောင်းဘွဲ့ ပေးလိုက်မယ်… ။ မိန်းကလေးမှန်လျှင် ရှက်သင့်တဲ့နေရာမှာရှက် ၊ ကြောက်သင့်တဲ့နေရာမှာ ကြောက်ရမှာပေါ့ … ။ အရှက်မကြောက်မရှိပဲ သွားလာနေလို့ကတော့ … ဘယ်သူကမှ တန်ဖိုးထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. ။ လူနေထိုင်မှူ အဆင့်တန်းတောင် တစတစ ပြောင်းလဲလာသေးတာပဲ .. ယဉ်ကျေးမှူဆိုတာလည်း အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့ အခြေနေနဲ့ အချိန်ခါနဲ့ပေါ် မူတည်ပြီး သင့်တင့်အောင် နေသင့်တယ်လေ … ။ ဘုန်းကြီးကြောင်းကို မီနီစကတ်ဝတ်သွားလို့ သင့်တော်ပါ့မလား တွေးကြည့်ပါ… ။ မီနီစကတ်လောက် ရုံးတက်ဆင်း ၀တ်တာ ယဉ်ကျေးမှူမျက်စိနဲ့ ကြည့်လျှင် မရိုင်းပေမဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလို နေရာမျိုးကျတော့ ဘယ်သင့်လျှော်ပါ့မလဲ … ။ အတွေးတွေ မှိုတတ်မနေပါနဲ့ … လှေနှံဓါး ထစ်နေလျှင် သူများတွေကျော်တတ်သွားလိမ့်မယ်.. ။ အပေါ်က တယောက်မန်းတာကို ပြန်ပြောတာပါ… ။ သူအင်တာနေရှင်တန်းဝင်မှ စပွန်ဆာပိုကာင်းကောင်းရမှာလေ ကြိုးစားထားဝိုင်းစုရ …
ကမ်းခြေမို့လို့ သူဒီလိုဝတ်တာ မလွန်ပါဘူး … ဒါပေမဲ့ ဒီပုံတွေ ဘယ်လိုပွလာတာလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်… အတူသွားတဲ့ ဘယ်သူကပဲ ရိုက်ပြီး ဖြန့် ခဲ့တာလား… ၀ိုင်းစုကိုယ်တိုင်က ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ချင်လို့ ကိုယ်တိုင်ဖြန့်တာလား ဆိုတာပါပဲ…
မ etone ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်
ဒါပေမယ့် တစ်ခုမရှင်းတာ ရှိလို့ မေးရင်ကောင်းမလား မမေးရင် ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာ
ဘာမေးမလဲ ဆိုတာ ရိပ်မိမှာပေါ့ … ကျွန်တော်က ပေါက်ကရစဉ်းစားတဲ့သူဆိုတော့
အဲဒါဆို တစ်ခုပြောရဦးမယ်… မိန်းကလေးတွေကိုချည်း ပြောနေတာ… ယောက်ျားလေးတွေရော အခုဝတ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီတို ဘောင်းဘီရှည်တွေက ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုစစ်စစ်က လာတာတွေ ဟုတ်လို့လား… တဖက်သက်စောင်းနင်း မိန်းကလေးတွေကိုချည်း မပြောပဲနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါလား… ဘာလဲ ယောက်ျားလေးတွေလည်း မိန်းကလေးတွေကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းပဲ မြင်ချင်ရင် ယောက်ျားတွေလည်း ပုဆိုးတောင်ရှည်စကြီးတွေ ၀တ်ကြပါတော့လား… ယောက်ျားလေးတွေ ရေကူးရင် အတွင်းခံနဲ့ မကူးကြဘူးလား… အဲလိုပဲ မိန်းကလေးတွေလည်း အတွင်းခံဝတ် ရေကူးတာ ဆန်းလို့လား… ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပါလာရအောင် အခု ၀ိုင်းစုဒီလိုဝတ်ပြီး သွားနေတဲ့ နေရာက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားနေလား… ပြန်ပြီးတော့ မျက်လုံးကို တစ်ထွာတည်းကိုပဲ ကြည့်မနေပဲ တစ်လံလောက် တနိုင်တပိုင်လေး ထွာကြည့်ပါဦး… ၀ိုင်းစုဘုန်းကြီးကျောင်းသွား အလှူအတန်းလုပ်နေတဲ့ပုံတွေမှာ ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ မြန်မာဆန်ဆန်လေး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး လုံလုံခြုံခြုံလေးမှ ဟိုဖက်တောင်လွန်သေးတယ်… မသိရင် ပုံတွေလည်း ရှာကြည့်လိုက်ဦး… အဲလိုမျိုးပဲ လူဆိုတာ နေရာဒေသဆိုတာ ရှိတယ်… ကိုယ်ကတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး… သူများကိုတော့ လုပ်စမ်းဟဲ့ ဆိုတာမျိုးက ဖြစ်မလား… ကျနော် မြင်မိသလောက်ကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်းက ဟောလီဟပ်လပ် အ၀တ်အစားဝတ်သွားနေတာ တစ်ခါမှ မမြင်မိပါဘူး… လုံခြုံကြတာချည်းပဲ… ကြည့်တဲ့သူတွေကသာ ဘယ်လိုမျိုး မျက်လုံးတွေနဲ့ လိုက်ချောင်းကြည့်နေကြလဲမသိဘူး… ပြီးတော့ စပွန်ဆာကိစ္စကပါလာရအောင် သူ့ဟာသူ အဆင်ပြေလို့ စပွန်ဆာနဲ့နေတာ ကိုယ်တွေနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ… စပွန်ဆာကလည်း သူတတ်နိုင်လို့ စပွန်ဆာလုပ်တာပေါ့… အနေသားကြီးပါ… နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေနေတာပဲ ရှေးရိုးစွဲ ဖိုဝါဒရှင်ကြီးတွေ သတိထား… နိုင်ငံတကာမှာ အရှက်ကွဲမယ့်အဖြစ်တွေ… အဲဒါတွေကြောင့် မတိုးတက်တာ… ဒီလောက်အမြင်တွေ ကျဉ်းမြောင်းနေတာကိုး… စောကားမိသလိုလည်း ဖြစ်သွားပြန်တာလား မသိ… ပြောရင်း အရှိန်လွန်သွားတယ်…
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း အနေထိုင်မတတ်ရင် မတတ်သလို ဝေဖန်ခံရမှာပဲ ။ နင်က ဘာလို့ နာနေတာလဲ ။ နင်နဲ့ လင်လုဘက်လား ၊ မယားပြိုင်လား………။
ခက်တော့တာပဲ ငါ့နှယ် … အထီးမှန်း မမှန်း မသိတဲ့ဟာနဲ့ ငြင်းခုန်နေမိပါလိမ့်… ။
မဖြိုးလား ၊ ကိုဖြိုးလား မသိတဲ့တယောက်ရေ … မင်းသူများကိုပြောနေရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ခေတ်ဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့ပြီမှတ်သလဲ … အခုထိ တောင်ရှည်ပုဆိုးနဲ့ ၊ ထမိန်သိမ်းထဲကကို မထွက်နိုင်တော့ပါလားဟေ့…. ။ လူနေမှူ အဆင့်တန်းပေါ် မူတည်ပြီး ၀တ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ မှူတွေ ပြောင်းလဲလာတာ ကလေးတောင် သိတယ်.. မင်းတောင်ရှည်ဝတ်တဲ့ခေတ်မှာ နွားလှည်းပဲ စီးလို့ရမယ် … လှေနှံဓါးထစ် လုပ်ချင်မနေစမ်းပါနဲ့ဟာ … ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြတိုက်ထဲက အ၀တ်စားပဲ ပြေးမြင်နေရလောက်အောင် ဗဟုသုတရှိလွန်းလို့ အရမ်းကို လေးစားမိပါတယ်
မုန့်လုံးကို စက္ကူလာကပ်နေမနဲ့ အဲ့ဒါဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်.. မျက်မှန်မတက်၊ မျက်စိကောင်းတဲ့လူဆိုလျှင် ငါဘာရေးထားလဲ တခါပြန်ဖတ်ပြီးမှ ပြန်ပြော။
” ယောက်ျားလေးတွေရော အခုဝတ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီတို ဘောင်းဘီရှည်တွေက ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုစစ်စစ်က လာတာတွေ ဟုတ်လို့လား…”
ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်ဖတ်ဖူးခဲ့ တဲ့ ဟာလေးပြောပြချင်တယ်။
မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတစ်ယောက် (အဲ့စာရေးဆရာနာမည်မမှတ်မိတော့ တာ
ခွင့် လွှတ်ပါ၊ ဖတ်ဖူး မှတ်မိနေသူများရှိရင်လည်း သူ့ နာမည်ကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ်)
သူ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို လေ့ လာရေးခရီးသွားတုန်းမှာ ဗီယက်နမ်က ကောက်စိုက်သမတွေ ဘောင်းဘီရှည်တွေ ဝတ်ပြီးအလုပ် လုပ်နေတာမြင်လိုက်ရာ
ကနေ ဟိုးရှေးရှေးခေတ်ကတည်းကနေ အခုခေတ်ဘောင်းဘီတွေနဲ့မတူတဲ့ ဘောင်းဘီတွေ မြန်မာတွေ
ဝတ်ခဲ့ ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းမှ အိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဝင်ရောက်လာပြီး လုံချည်ကို သုံးစွဲ
ဝတ်ဆင်ကြောင်း ခေတ်အထောက်အထားတကွ ရေးသားထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
သူ့ရဲ့ခေါင်းပိုင်းက ကိုယ်လုံးထက်ပိုကြီးနေသလိုပဲနော်။ သူမှ ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူး။ ကွန်ပြူတာနဲ့လုပ်ထားတာလားလို့။ မသိလို့မေးကြည့်တာပါ။ နောက်ခံကလဲ နိုင်ငံခြားမှာဟုတ်။
သူမှသူအစစ်ပါ…..ဒါပေမယ့် facebook ထဲမှာပါပြီးသားပုံကြီးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်….
နောက်ခံကို ခန့်မှန်းကြည့်တာ ဘာလီကျွန်းနဲ့ တူတယ် ..
ဗုံးပေါက်ဖူးတဲ့ ကုန်တိုက် တွေ့ရတယ် .. ကမ်းခြေ စောက်တယ် နည်းနည်း သွားရုံနဲ့ ရင်ခေါင်းလောက် ရောက်သွားတယ်
ခါးနည်းနည်းလေးတုတ်လာပြီး ဗိုက်ကလေး မဆိုသလောက်ပူနေတာက လွဲရင် ကျန်တာ အကုန်ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲ ပြတဲ့သူကပြမှာတော့ ကြည့်တဲ့ သူတွေကြည့်တာ မလွန်ပါဘူးလေ ….. .
ဘာမှမပါရင် ပိုကြည့်ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
သားရေတွေလည်း သုတ်လိုက်အုန်း ကိုking ရေ…:)
ကြည့်သောသူ မြင်၏ …ပြသောသူ ကုသိုလ်ရ၏တဲ့….:)
အော် ငါ့မသိအောင် ဖြစ်ပျက်နေလိုက် ၀ိုင်းစုတို့ကတော့ အိမ်ကျမှ တွေ့မယ် ဟင်းးးးးးးးးး
မမ၀ိုင်းစုရယ် ကိုဟိန်းဝေယံနဲ့ ဖြစ်ပြီးမှ ဒီလိုမျိုးတွေ တွေ့ရတာနော်
မမ၀ိုင်းစုက ရွဲ့ ရင် ကိုယ်က မိန်းကလေးလေ ကိုယ်ဘဲနစ်နာမယ်
ရိုးရိုးလေးနေလဲ လှပြီးသားပါမမရယ် ဟိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ မမ၀ိုင်းစုကိုသနားလိုက်တာ
အဲ့ဒါမျိုးစာတွေ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွခ်မှာ သွားရေးပါလား ။ ဒီမှာရေးလို့ သူသိချင်မှ သိမှာ ။
မှန်ပါ့ရှင်…. သူတို့ ဖုန်းrecording ကိုနားထောင်ရတာရှက်တောင်ရှက်တယ်….
အစဉ်အလာမပျက်အောင် ဝင် ဂလု လိုက်မယ်…. ဂလု !!
ဘာပဲပြောပြော ဖက်ရှင်ထင်တာထက် ပိုဆိုးနေတယ်နော်။ နိုင်ငံခြားမှာကြည့်ကောင်းပေမဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့
ဆိုမလိုက်ဖက်ဖူးလို့ ခံစားရတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးပါပဲ။ ဝေဖန်တာထက်လွန်ရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ သတိလေးတွေရှိစေချင်တယ်။
မမအိတုံက အမြင်ပွင့်လာပြီပဲ အဲဆို… မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တောင်ရှည်ခေတ် ထိုင်မသိမ်းခေတ် မဟုတ်တော့တာ သိလာပြီဆိုတော့ အခု ၀ိုင်းစုလေး ၀တ်ထားတာလည်း ခေတ်နဲ့အမှီ ရေကူးဖက်ရှင် ဆိုတာ နားလည်ပေးသင့်ပါပြီ… ဒါနဲ့ ကျနော့်ကို အထီးမှန်း အမမှန်း မသိဘူးဆိုတော့ ကျနော်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဗေဒ ဖွဲ့စည်းမှုက (Sex) က အများသတ်မှတ်ထားတဲ့ ယောက်ျားလေးပါ… ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုက ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းကိုပဲ ချစ်ပါတယ်… အဲဒါကို ယေဘုယျ သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂေး (Gay) လို့ခေါ်ပါတယ်… အိုး.. ပြောရဦးမယ်… ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ အများသတ်မှတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးအ၀တ်အစား ၀တ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးနော်… ဟီးဟီးဟီး… မယုံမရှိနဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများ လိုက်လိုက်ကြိုက်ကြလွန်းလို့ ပြေးနေရတယ်ဗျ… အဲလောက်စွန်တာနော်… နောက်ပြီးတော့ အခုဏကပြောသလိုပေါ့ ယောက်ျားမှ မိန်းမမှ ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ကျနော့်ကိုတော့ အဲဒီလိုမျိုး သတ်မှတ်ချက်တွေ ထားပေးတာကို မကြိုက်ပါဘူး… ကျနော်က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတယောက်လိုပဲ မြင်ခိုင်းစေချင်ပါတယ်…
နင်ဂေးဆိုတာ ၀န်ခံကတည်းက လုံးဝလုံးဝကို ဆက်ရေးချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ အတိလင်းပြောလိုက်တယ် ငါကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိတ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ စကားမပြောချင်ဘူး … ။ အာရုံနောက်တယ် ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော့်ကို ပေါ်တင်ပြောတဲ့အတွက် ကျနော်လည်း ပြန်ချေပပါ့မယ်… ကျနော့်ကို ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘာအတွက်ပြောတာလဲ… ကျနော်လိုချင်တာက သေချာတိကျတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို လိုချင်တာပါ…
ကဲ … ကျနော့်မှာကတော့ သေချာတိကျတဲ့အကြောင်းပြချက် ရှိပါတယ်… လိင်တူချစ်သူတွေကို ရောဂါသည်များ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က အတိအလင်း ကြေညာထားတာ ၁၉၉၁ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ကြေညာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်… ကဲ ကျနော်မေးတာကိုပဲ ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်… အချက်အလက်ကို တိကျပါစေ… ကျနော်က ရမ်းသမ်းပြောတာထက် အချက်အလက်ကို ပိုလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျား…
နာလည်း ဘူနဲ့မှ ပြောဝူး
နာဖာသာ ရေးချင်တာ ရေးမယ်
အောက်ကပုံမှာ ကောင်မလေးချက်ထဲ ရွှံ့တွေဝင်နေသလားလို့……… ဖယ်ပေးချင်လိုက်တာ………:P
၀ိုင်းစုကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ…. ဒီတစ်ခါတော့ ထင်ရှားတယ်ကွာ… သူများတွေထက် သာချင်ရင် သူများတွေထက် သာအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာ မှန်တယ်ကွာ
King … အိမ်ကျမှဘာတွေ့မှာလဲ … ဓါတ်ပုံကိုလား .. … အောက်တစ်ပုံရဲ့ ရင်ဘတ်ကလည်း ရေများစိုလိုက်လို့ကတော့ … အနုပညာလောက စစ၀င်ဝင်ချင်းဆိုရင် တစ်မျိုး ၊ နာမည်ရလာရင် ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားကြတာပဲဆိုတော့ မထူးဆန်းတော့ပါဘူးနော် …
အိမ်ကျမှ တွေ့မယ်ဆိုတာ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် အားမရလို့
အိမ်ရောက်မှ ပိုစတာကို ထပ်ကြည့်အုန်းမယ်လို့ ကြုံးဝါးတာပါဗျ
ဘာပဲပြောပြော.. တော်တော်လှတယ်… မျက်နှာပေးက sexy မဖြစ်နေဘူး….
လှပါဘူး … မြန်မာမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆို ဘယ်လိုမှမလှတာ အမှန်ပဲ …
i think this is normal dress and not sexy on beach
ကမ္ဘာ့ စံချိန်မှီ ပါဘဲ
အီးတုံးလား အိတုံလား မင်းက သူများ ၀တ်တာစားတာကို ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ မင်းသူများလှတာကို မနာလိုဖြစ်နေတာလား သေချာတယ် ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး ဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာ မင်း ဂျေဝင်နေတာ ကွ ။နောက်ပီး ကိုဖြိူးကို မင်း ပေါ်တင်ပြောတာ ဒါလား ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့မြန်မာမိန်းကလေး …။သူများကို ပြောချင်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ့် အရင်ပြန်စမ်းစစ် ရတယ်ငါ့နှမ။ ပီးတော့ မင်းအပြောမကြီးနဲ့ တော် ကြာ မင်း နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ၊ မင်း အလေး ထားနေရတဲ့ ယောက်ကျား တစ်ယောက်ယောက်က တော်ကြာနေ မင်းမသိတဲ့ အပုန်းဖြစ်နေရင် မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဥပမာ မင်း ဘဲက
အပုန်း တို့ မင်းလင်တော်မောင်က အပုန်းတို့ဆို ဘယ်လိုနေမလဲ???????????????????????????????????????????
PS င့ါနှမ အီးတုံးလေး ကို တက်သိနားလည်စေလိုသည့် သဘောဖြင့် အကောင်းမြင်တက်စေရန် ပြောဆိုဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်။
အော် နောက် ငါ့နှမက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စကားမပြောဘူးဆိုတော့ ငါ့နှမ က ပုံမှန်ပေါ့။ ဒီလိုလား ကိုယ်တို့ ဘုရားဟောခဲ့တာကတော့ လူတိုင်းက ရူးနေကြတာပဲ တဲ့ ဒါဆို လူတိုင်းက ရူးပြီး ငါ့နှမတစ်ယောက်ထဲ ပုံမှန်ပေါ့နော် ။ ဒါဆိုငါ့နှမလိုပဲ ပုံမှန်တွေရှိတဲ့နေရာကို ရှာပြီး ကြွသွားပါလား တော်နေကြာငါ့နှမကို ကူးကုန်ပါ့မယ်။
PS ပုံမှန်ဖြစ်သော ငါ့နှမလေးအား စိုးရိမ်ကြီးစွာ သတိပေးပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
တိုပါစေ…သူတောင်တိုရဲသေးတာ ငါတို့ လဲ….ကြည့်ရတာပေ့ါ
၀ိုင်းဆုကိုအမြင်ကတ်သွားပြီ… ဘာလို့ဆိုတော့ (အကုန်လုံးမချွတ်ထားလို့) အဟိ
အောက်ဆုံးကပုံ မြင်ရတော့ အိုးဆားဗစ် အိုးဆားဗစ် သီချင်းကိုသွားသတိရတယ်
တိုပေါ့ သူဟာသူတိုတာ ။ ကမ်းခြေဘဲလေ မဟုတ်လား ။
ဘုရားသွားတာတို့ ။ လူကြီးသူမတွေနဲ့ တွေ့ရင်သာမကောင်းတာပါ ။
အီးတုံးလား.. အိတုန်လား… တော်တော်နံတာပဲ..
အင်း …ဒီ ဂဇက်ထဲမှာ ရှောင်သင့်တဲ့သူတွေကို မှတ်ထားရဦးမယ်